कम्युनिष्ट र बलिउडको तिक्तता तोड्दै कन्हैया र स्वारा भास्कर — News of The World
२९ चैत, काठमाडौ । कम्युनिष्ट र बलिउड बिच खासै सुमधुर सम्बन्ध रहेको पाइदैन । भारतका कम्युनिष्टहरुको नजरमा बलिउड एक उत्ताउलो र युवालाई दुव्र्यसन उन्मुख गराउने क्षेत्र हो । यसकारण भारतीय कम्युनिष्टहरु र बलिउडलाई उल्टो यात्राका यात्री मानिन्छ ।
तर यो मान्यता पछिल्लो समयमा ब्रेक भएको छ । यसलाई ब्रेक गर्दे छन् जवाहरलाल नेहहरु विश्वविद्यालयका स्टार नेता डा कन्हैया कुमार र अभीनेत्री स्वरा भास्करले । जेएनयुको छात्र संघका सभापति डा. कुमार अहिले बिहारको वेगुसराय बाट कम्युनिष्ट पार्टीको टिकटमा लोक सभाको निर्वाचन लडीरहेका छन् । डा. कुमारलाई साथ दिदै छीन विगत एक दशक देखि भारतीय सीनेमामा छाएकी भास्करले ।
भास्करले डा. कुमारको निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गरेर कम्युनिष्ट र बलीउडको उल्टो यात्रालाई सुल्टो बनाउने प्रयास गरेकी छिन । अहिले वेगुसरायमा बसेर भास्करले आफ्नो जन्म दिन मात्रै मनाएकी छैनन्, झुपडपट्टीमा पुगेर डा. कुमारलाई मत समेत मागेकी छन् । अप्रिल ९ मा परेको आफ्नो जन्मदिन .. मनाउँदै भास्करले डा. कुमारका लागि मत मागेको भारतीय मीडियाले जनाएका छन् ।